4 LG G6 nsogbu na azịza ha | Gam akporosis
Elvis bucatariu | | Ngwa gam akporo, LG, Nkuzi
Na nnukwu ihuenyo 18: 9, ihe ntanetị Snapdragon 821 na igwefoto abụọ na azụ, LG G6 enweghị obi abụọ ọ bụla onye nke kasị mma smartphones enwere ike ịzụta taa.
Mana dị ka ama ọ bụla, LG G6 nwekwara nsogbu ya, yabụ anyị ejirila ụfọdụ mee mkpokọta obere nsogbu kachasị na LG flagship tinyere ụzọ ụfọdụ iji dozie ha.
1 LG G6 - Nsogbu Batrị
2 LG G6 - Nsogbu na nnyefe ma ọ bụ nkwanye site na Bluetooth
3 LG G6 - Okwu Igwefoto na Ọnọdụ Ọnọdụ Dị Ala ma ọ bụ Ndị Na-akpụ akpụ
4 LG G6 - Nsogbu Nwayọọ ma ọ bụ Nsogbu Na-agafe agafe
LG G6 - Nsogbu Batrị
Enweela ọtụtụ akụkọ gbasara nsogbu nwere ike na nnwere onwe nke LG G6. Agbanyeghị na onye nrụpụta ahụ kwere nkwa ihe dị ka ụbọchị 1 maka ekele maka 3300mAh batrị agbakwunye na LG G6, ọ bụrụ na batrị batrị gị na-agba ọsọ ọsọ, gbalịa ụfọdụ n'ime azịza ndị a:
Jide n'aka na ị nwere ụdị sọftụwia kachasị ọhụrụ site na ịga Ntọala> Banyere mobile> Mmelite ngwanrọ> Melite ugbu a.
Lelee Ntọala> Batrị na ichekwa> Iji batrị ma chọọ ngwa ndị na-ekpochapu batrị ngwa ngwa karịa ka ọ na-aga ma wepụ ha ma ọ bụrụ na ịchọghị ha.
Iwepụ ma ọ bụ gbanyụọ ngwa ọdịnala ị na-emeghị atụmatụ iji. Iji mee nke a, gaa Ntọala> Ngwa.
Ihuenyo bụ ihe na-erepịa batrị kachasị na ekwentị ọ bụla. Gaa na Ntọala> Gosiputa ma gbalịa gbanyụọ ọnọdụ Always-On, belata oge nkwụsị ihuenyo ma ọ bụ nchapụta iji chekwaa ndụ batrị ọzọ.
LG G6 - Nsogbu na nnyefe ma ọ bụ nkwanye site na Bluetooth
Nke a bụ nsogbu nke na - apụtakarị n'ọtụtụ mobiles mgbe ị na - ejikọ ha na sistemu Bluetooth n'ime ụgbọ ala. Ọ bụrụ n’ịchọta na ị na-enweta nsogbu ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnụ ụda dị iche mgbe ị na-egwu egwu site na Bluetooth, gbalịa ụfọdụ n'ime usoro ndị a:
Kọwaa ebe nchekwa ahụ site na ngwa ọ bụla ị na-eji maka iyi egwu, dị ka Spotify ma ọ bụ Google Play Music. Gaa Ntọala> Ngwa> Spotify (ma ọ bụ ngwa ọ bụla ị na-eji)> nchekwa> Clear cache.
Gaa na Ntọala> Bluetooth, anya maka ngwaọrụ na ị jikọrọ na pịa aha ha na mgbe ahụ na nhọrọ Jikọọ ịmalite usoro.
Lelee ma onye na-emepụta ụgbọ ala gị na-atụ aro ụfọdụ mmelite ngwanrọ iji wụnye ha na usoro ụgbọ ala gị. Ọzọkwa, gbalịa hichapụ ihe ọ bụla Bluetooth ngwaọrụ agadi na e dere na ebe nchekwa nke ụgbọ ala gị.
LG G6 - Okwu Igwefoto na Ọnọdụ Ọnọdụ Dị Ala ma ọ bụ Ndị Na-akpụ akpụ
Igwefoto LG G6 abụọ bụ otu n'ime atụmatụ dị mkpa nke ngwaọrụ ahụ, mana ọ bụghị mmadụ niile na-enwe obi ụtọ na arụmọrụ ha, karịsịa mgbe ọ na-abịa ọnọdụ ndị dị ala ma ọ bụ nwee isiokwu ndị na-akpali akpali. Ọ bụrụ n ’ọ bụ na foto niile ndị isi gị na-agbacha agbacha ma ọ bụ na ị hụrụ na igwefoto enweghị ike iwe ezigbo foto mgbe enwere ọtụtụ onyunyo, nwalee azịza ndị a:
Gbaa mbọ hụ na inwere ọhụrụ software version site na ịga na Ntọala> Banyere mobile> Mmelite ngwanrọ> Melite ugbu a.
Mepee ngwa igwefoto wee tinye akara ngosi ntọala. Gbanyụọ mgbadochi anya ma lelee ma nsonaazụ ya ka mma.
Cheta na i nwere ike toggle n'etiti wide angle lens na ọkọlọtọ lens na ịpị na akara ngosi osisi.
Ọ bụrụ n'ịhụ mmezi mgbe ịnwale ndụmọdụ ndị a, maọbụ ọ bụrụ na ị nwere nsogbu dị ka a green straipu, ị kwesịrị kpọtụrụ ndị na-emepụta ya ma ọ bụ ụlọ ahịa na-eweta LG G6 iji nye iwu ka edochi ya.
LG G6 - Nsogbu Nwayọọ ma ọ bụ Nsogbu Na-agafe agafe
LG G6 bụ ama dị ike nke na-arụ ọrụ nke ọma na ọnọdụ niile, mana ụfọdụ ndị ọrụ mere mkpesa banyere "oge" ugboro ugboro ma ọ bụ mkpọka mgbe ị na-agagharị site na ngwa ma ọ bụ ibe weebụ ma ọ bụ mgbe ị na-ede ozi.
Iji dozie nsogbu ndị a, gbalịa ndụmọdụ ndị dị n'okpuru:
Gaa na Ntọala> Onye Mmepụta nhọrọ. Ọ bụrụ na ịhụghị nhọrọ a, gaa na Banyere ekwentị> Ama ngwanrọ wee pịa Mee nọmba ma ọ bụ Mee nọmba 7 ugboro n'usoro. Ozi kwesịrị igosi na-ekwu na arụ ọrụla ndị nrụpụta. Ugbu a, na Onye Mmepụta Nhọrọ panel ị ga-ahụ nhọrọ 3: Ngosipụta nke mmegharị windo, Akara Ntụgharị Ntugharị, na Ogologo oge mmegharị. Tinye ha niile 0.5x ma ọ bụ gbanyụọ ha kpamkpam na ị ga-achọpụta ihe dị iche.
Ndị ọzọ kwuru na arụmọrụ dị mma mgbe enwere nyeere nhọrọ nsụgharị Force GPU na Ntọala> Onye Mmepụta Nhọrọ.
Nsogbu nwayọ na LG G6 nwekwara ike ịbụ n'ihi ntọala ma ọ bụ ngwa ochie na iji nye ngwaọrụ gị ndụ ọhụụ nwaa a factory nrụpụta. Iji mee nke a, gaa Ntọala> Ndabere na weghachite> orylọ ọrụ data weghachi> Weghachi mobile.
Anyị nwere olile anya na ndụmọdụ ndị a enyerela gị aka n’idozi nsogbu ị na LG G6 nwere. Dị ka ọ dị na mbụ, egbula oge ịhapụ anyị ikwu iji tụọ azịza ndị ọzọ ma ọ bụ gwa anyị nsogbu ndị ọzọ na ọdụ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » 4 LG G6 nsogbu na azịza ha
Ọ bụghị G6 bịara na Snapdragon 821 chip? Ihe ọzọ: ọtụtụ nsogbu na obere oge kemgbe mmalite ya? MMM…
Zaghachi Miguel Vera
Ndewo Miguel ma daalụ maka okwu gị. N'ezie, LG G6 na-eweta Snapdragon 821. A gbazie ya.
Zaghachi Elvis Bucatariu
Obi dị m ezigbo ụtọ banyere LG G6 ọhụrụ m. Gịnị a mmechuihu mgbe a ọnwa ojiji. Ndụmọdụ ndị a niile dị m ezigbo mma, echere m na a ga-eme ka ha zie ezi na ekwentị ochie!
Ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ ego nke ngwaọrụ a ka ọ ghara ịnagide ọtụtụ aro.
Ekwentị m gara aga bụ usoro Lg Flex2 na enwere m ike ikwe nkwa na ọ na-agbanye LG G6 a ugboro puku, na ọsọ, na ihuenyo, wdg. Ogologo igwefoto bụ naanị ihe dị mma banyere G6, mana eziokwu siri ike bụ na "ihu ọma na ịse foto, oge mbụ" nke na-apụtaghị ọhụụ.
Ha rere m ọnụ a ka ọ kachasị !! yana iji ego di elu !!
Ekwuru m, achọpụtara m ezigbo LG Flex2 Curve.
Kpamkpam eziokwu! Anọ m oge 100 na lg flex 2 curve. Anọ m na-eji lg g15 a dị oke ọnụ maka ụbọchị 6 ma enwere m mmechuihu na batrị ya, obere ngosipụta iji zoo ngwa ndị na-adịghị mma. N'ezie, naanị ihe gbakwunyere bụ igwefoto azụ abụọ.
Abia m na lg g4 nke na enye m nsogbu na wifi, blutou aghala m ịgbanwe motherboard. Anọ m na g6 ụbọchị abụọ ma m ga-enyeghachi ya. Igwefoto anaghị amasị m ma ọlị na ihuenyo na usoro nke igwu vidiyo ọ bụla. Lg g4 ka mma. Gaa shit na n'elu ya lagea. Amaghị m ma ọnụ a ọ dị njọ
Ekwentị Lg G6 nwere ọtụtụ ihe dị mma mana ọ dị nwute na ọ bụ nke mbụ m na-azụta ... yana maka uru m na-ekwesịghị inwe nsogbu m ghọtara na ọnụahịa ahụ ga-abụ dị ka etiti etiti m amaghị ... mana nke m dị na oku na Gị, onye nke ọzọ n'akụkụ nke ọzọ, akụkụ nke okwu ahụ, na-ege ntị na akụkụ, mgbe ahụ, n'ezie, n'ime izu abụọ ọ na-adị m ezigbo njọ na naanị ihe m na-eji bụ na oku anaghị arụ ọrụ M ka ha kwesiri ịbụ .. na ọ bụghị gị kpatara mgbanwe Ọ dị njọ na mmadụ hụrụ onwe ya n'etiti nkume na ebe siri ike ịnwe ekwentị ma hapụ onwe ya inwe ya ebe ọ bụ na ha agbanweghị ya
Zaghachi M. Lis
Ndewo, azụrụ m ama a n'ihi na m ka jiri LG g2 nke na-enyeghị m nsogbu, na ihe na-erughị otu ọnwa ọ gbochiri m oge 2, na ihe niile m nwere funahụrụ m, ọ gaghị ekwe omume itinye ya ugboro ugboro Anaghị m anabata ọzọ ma ọ bụrụ ụkpụrụ ma ọ bụ okwuntughe, na oge niile m na-ekwu ihe na-ezighi ezi n'agbanyeghị etu m siri tinye ya, m ga-amalitegharị ụlọ ọrụ ahụ n'ihi na enweghị m nhọrọ ọzọ, nke na-ezighị ezi na LG g6
Zaghachi Nestor c
My LG G6 Gbanyụọ ihuenyo na-aga ojii na XY bịara dị ka ọ bụrụ na ọ ga-Gbanyụọ na m enweghị ike agbanwu ya m ga-amasị iji weghachite ekwentị m ọzọ
Jesus Enrique Martínez Aguilar dijo
Anọ m na-ekerịta ihuenyo site na cromcats na n'oge ahụ ihe onyonyo ahụ juru ya anya, ya mere ọ ka juru anya, ị nweghị ike gbanyụọ ekwentị ahụ, kedu ihe m ga-eme
Zaghachi Jesús Enrique Martínez Aguilar
AGH ,GH,, NTTR D DBỌR WITH NA G6 TUBE G5 NA EZI EZI KWES THER THE KWES THERAM CAMERA NA Mkpebi nke vidiyo ahụ na-eleghara atụmatụ aghụghọ nke naanị ihe a na-emepụta na nke ahụ ...
Ọ bụ ihe nwute ọtụtụ vidiyo na YouTube (akwụ ụgwọ) nke mere ya nnukwu ihe ịtụnanya na ọ bụ nke kachasị njọ na ọnụahịa a na-akwụ maka nnukwu ndakpọ olileanya ọ kpatara m, ngụkọta aghụghọ ọ bụla ha na-enye ghọrọ eziokwu. Ma karie ka odi ala ekwenti, o bu ihe nwute ...
Ekele m, nke m abụghị azịza, ọ bụ ajụjụ, enwere m G6 nwere nsogbu ihuenyo mmetụ, ọ nwere mpaghara anaghị arụ ọrụ na etiti ihuenyo ahụ, akara ngosi, njikwa igwefoto dị na mpaghara ahụ na ekwentị ọnụọgụ nke gụnyere 1, 2 na 3 bụ nsogbu enweghị ike iji ha mee ihe, agbanyeghị mgbe m tinyere ya n'ọnọdụ nchekwa nsogbu ahụ ga-apụ n'anya, ihe niile na-arụ ọrụ zuru oke, mana ọ bụ n'ụzọ ezi uche dị na enweghị m ike iji ya mgbe niile dịka nke a n'ihi na ọ na-ewepụ ihe niile m chọrọ , ọ bụrụ na mmadụ maara ụzọ isi dozie nsogbu a ana m arịọ gị ka ị kerịta ihe ngwọta ahụ, m ga-enwe ekele mgbe niile. N'agbanyeghị, ngwaọrụ m enwetụbeghị mmiri.
Zaghachi Enrique Figueroa
Ekwentị m anaghị arụ ọrụ ekwentị ma ọ bụ akara ngosi
Ndewo onye ọ bụla, biko, achọrọ m enyemaka. Enwere m Lg G6 Android 7 ma emelitere ya na gam akporo 8, ọ na-egosi na enwere m nsogbu, ọ na-eme ka ụfọdụ ozi na-ekwu "ọ dị mwute na agbanyụrụ ihuenyo ahụ mgbe niile, ị ga-emechi ngwa ahụ." Ka m mee ihe ọ bụla m ga-amalitegharị ekwentị m iji ya ọzọ ka o wee mebie m. Ekele si Nicaragua biko nyere m aka +50587588662
Zaghachi Byron Rizo
Nnukwu ego. Ọ na-amasị m na ya. Ihuenyo mgbe niile na-agba oyi. Ngwa ndị ahụ anaghị arụ ọrụ nke ọma, ọ dị oke njọ, dị nnukwu na ngwa m rịọghị ka emeghe n'onwe ha. Ngwa a anaghị arụ ọrụ nke ọma, anaghị akwado ha na ekwentị a.
Esi lelee Real Madrid - Barcelona 2017 maka n'efu, iwu na ogo HD
Na-Okporo ụzọ Replay, ngwa nke ga-echebe gị pụọ n'ihe egwu nke SMS mgbe ị nọ n'azụ ụkwụ